ဆရာဝန် ညီလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဆေးခန်းကို လာပြတာ အသက် ၂၀ ကျော် ကောင်ကလေး ၊ သူ့စအိုကနေ အကောင် အရှင်လေးတွေ …. - Real Gaming Myanmar
ဆရာဝန် ညီလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဆေးခန်းကို လာပြတာ အသက် ၂၀ ကျော် ကောင်ကလေး ၊ သူ့စအိုကနေ အကောင် အရှင်လေးတွေ ….
By ei zon /4months ago / Health / No Comments
ဆရာဝန် ညီလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဆေးခန်းကို လာပြတာ အသက် ၂၀ ကျော် ကောင်ကလေး ၊ သူ့စအိုကနေ ( intestinal fluke လို့ခေါ်တဲ့ ) အကောင် အရှင်လေးတွေ ထွက် ထွက်နေတာ ပေါ်လိုက် ပျောက်လိုက်နဲ့ ၃ – ၄ နှစ် လောက် ရှိပြီတဲ့ … ။
သတိထား မိတာတော့ အဲဒီ မတိုင်ခင် ဝက်သား တုတ်ထိုးတွေ အတော် စားဖြစ်တယ်လို့ ပြောတယ် ။ အဲဒီ အကောင်လေးတွေသာ အသည်းထဲမှာ တွယ်ကပ် မိရင် အတော်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ဒုက္ခ ပေးတော့မှာ ။
ဒီလပိုင်း / နှစ်ပိုင်းတွေမှာ ဆေးရုံ မှာလည်း မကြာ ခဏ တွေ့လာ ရတာတွေက အသက် ၃၀ ဝန်းကျင် လူနာတွေ အစာအိမ် ကင်ဆာ အူမကြီး ကင်ဆာတွေနဲ့ ၊ တစ်ချို့ ဆိုရင် ခွဲလို့ မရနိုင် တော့တဲ့ အခြေအနေမို့ အသက် ၃၀ ကျော် လေးမှာပဲ သေမင်း ရက်ချိန်း ကို ထိုင်စောင့် နေရတဲ့ ဘဝတွေကို ဖြစ်လို့ ။
အဲဒီလို လူနာတွေကို တွေ့ရ မြင်ရ ကြားရတိုင်း လမ်းဘေးမှာ မကျက် တကျက် ပြုတ်တွေ ထိုင်စားနေတဲ့ တုတ်ထိုး ဆိုင်တွေ ၊ မကျက် တကျက် ကင်တဲ့ အပြင် မီးခိုးငွေ့တွေ ညှော်ငွေ့တွေပါ ရိုက်ထားတဲ့ အကင် ဆိုင်တွေနဲ့ တစ်ခါတလေ ခေါင်းထဲ ဗိုက်ထဲက သွေးတွေတောင် ထွက်လာ တတ်သေးတဲ့ ငါးကင်တွေ …
နောက်တစ်ခါ ဆိုင်ကြီး ကနားကြီးတွေနဲ့ ရောင်းပြီး ဈေးကြီး ပေးစားရတဲ့ ဆိုင်တွေက ပွက်ပွက် ဆူနေတဲ့ အိုးထဲ ထည့်ပြီး ကျက်မှန်း မသိ မကျက်မှန်း မသိ ဆယ်စား နေကြတဲ့ အသား ၊ ငါး ၊ ပုစွန်တွေနဲ့ ready made အသင့်စား အစားအစာလို့ ခေါ်တဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက် ၊ ကြာဇံခြောက် ၊ ကော်ဖီမစ် ၊ တီးမစ်တွေကို မျက်စိထဲမှာပြေးမြင် မိတယ် ။
အသိဉာဏ် ဗဟုသုတ မရှိလို့ စားတာလား ဆိုတော့လည်း ကိုယ့် ဆရာဝန်တွေတောင် အတော်များများ အားပေး ကြတာ တွေ့ရတယ် ။ တစ်ခါတလေ ကြုံလို့ အပြောင်းအလဲ အဖြစ် စားမိတာ မျိုးက မထောင်း သာလှပေမယ့် တစ်ချို့ လူတွေကတော့ နှစ်နှစ် ခြိုက်ခြိုက် စွဲစွဲ လန်းလန်းကို စားကြ တာလည်း တွေ့ရတယ် ။
အဲဒီ လူတွေထဲမှာ ဒီအစာတွေဟာ ဒီလို ဒုက္ခတွေ ပေးတတ်တယ် ဆိုတာ သိတဲ့ သူတွေ အများကြီး ပါတာလည်း တွေ့ရတယ် ။ အဲဒီတော့ ပြောစရာက တစ်ခုပဲ ရှိတော့တယ် ၊ သေရဲရင် စားသာ စားကြ ပေတော့လို့ပဲ …. ။
မူရင်းရေးသူကို credit ပေးပါတယ်။ Photo by fb.
ဆရာဝနျ ညီလေး တဈယောကျရဲ့ ဆေးခနျးကို လာပွတာ အသကျ ၂၀ ကြျော ကောငျကလေး ၊ သူ့စအိုကနေ အကောငျ အရှငျလေးတှေ ….
ဆရာဝနျ ညီလေး တဈယောကျရဲ့ဆေးခနျးကို လာပွတာ အသကျ ၂၀ ကြျော ကောငျကလေး ၊ သူ့စအိုကနေ ( intestinal fluke လို့ချေါတဲ့ ) အကောငျ အရှငျလေးတှေ ထှကျ ထှကျနတော ပျေါလိုကျ ပြောကျလိုကျနဲ့ ၃ – ၄ နှဈ လောကျ ရှိပွီတဲ့ … ။
သတိထား မိတာတော့ အဲဒီ မတိုငျခငျ ဝကျသား တုတျထိုးတှေ အတျော စားဖွဈတယျလို့ပွောတယျ ။ အဲဒီ အကောငျလေးတှသော အသညျးထဲမှာ တှယျကပျ မိရငျ အတျောကို ဆိုးဆိုးရှားရှား ဒုက်ခ ပေးတော့မှာ ။
ဒီလပိုငျး / နှဈပိုငျးတှမှော ဆေးရုံ မှာလညျး မကွာ ခဏ တှလေ့ာ ရတာတှကေ အသကျ ၃၀ ဝနျးကငျြ လူနာတှေ အစာအိမျ ကငျဆာ အူမကွီး ကငျဆာတှနေဲ့ ၊ တဈခြို့ ဆိုရငျ ခှဲလို့ မရနိုငျ တော့တဲ့ အခွအေနမေို့ အသကျ ၃၀ ကြျော လေးမှာပဲ သမေငျး ရကျခြိနျး ကို ထိုငျစောငျ့ နရေတဲ့ ဘဝတှကေို ဖွဈလို့ ။
အဲဒီလို လူနာတှကေို တှရေ့ မွငျရ ကွားရတိုငျး လမျးဘေးမှာ မကကျြ တကကျြ ပွုတျတှေ ထိုငျစားနတေဲ့ တုတျထိုး ဆိုငျတှေ ၊ မကကျြ တကကျြ ကငျတဲ့ အပွငျ မီးခိုးငှတှေ့ေ ညှျောငှတှေ့ပေါ ရိုကျထားတဲ့ အကငျ ဆိုငျတှနေဲ့ တဈခါတလေ ခေါငျးထဲ ဗိုကျထဲက သှေးတှတေောငျ ထှကျလာ တတျသေးတဲ့ ငါးကငျတှေ …
နောကျတဈခါ ဆိုငျကွီး ကနားကွီးတှနေဲ့ ရောငျးပွီး ဈေးကွီး ပေးစားရတဲ့ ဆိုငျတှကေ ပှကျပှကျ ဆူနတေဲ့ အိုးထဲ ထညျ့ပွီး ကကျြမှနျး မသိ မကကျြမှနျး မသိ ဆယျစား နကွေတဲ့ အသား ၊ ငါး ၊ ပုစှနျတှနေဲ့ ready made အသငျ့စား အစားအစာလို့ ချေါတဲ့ ခေါကျဆှဲခွောကျ ၊ ကွာဇံခွောကျ ၊ ကျောဖီမဈ ၊ တီးမဈတှကေို မကျြစိထဲမှာပွေးမွငျ မိတယျ ။
အသိဉာဏျ ဗဟုသုတ မရှိလို့ စားတာလား ဆိုတော့လညျး ကိုယျ့ ဆရာဝနျတှတေောငျ အတျောမြားမြား အားပေး ကွတာ တှရေ့တယျ ။ တဈခါတလေ ကွုံလို့ အပွောငျးအလဲ အဖွဈ စားမိတာ မြိုးက မထောငျး သာလှပမေယျ့ တဈခြို့လူတှကေတော့ နှဈနှဈ ခွိုကျခွိုကျ စှဲစှဲ လနျးလနျးကို စားကွ တာလညျး တှရေ့တယျ ။
အဲဒီ လူတှထေဲမှာ ဒီအစာတှဟော ဒီလို ဒုက်ခတှေ ပေးတတျတယျ ဆိုတာ သိတဲ့ သူတှေ အမြားကွီး ပါတာလညျး တှရေ့တယျ ။ အဲဒီတော့ ပွောစရာက တဈခုပဲ ရှိတော့တယျ ၊ သရေဲရငျ စားသာ စားကွ ပတေော့လို့ပဲ …. ။
Previous: မန္တလေးသင်္ကြန်မှာ အမှိုက်ကောက်နေတဲ့ သားအဖနှစ်ယောက် လုပ်ရပ်လေးတွေ…..
Next: နွေရာသီရောက်ပြီဆိုတော့ အုန်းစိမ်းရည် သောက်ပါ….